नजिक न्युज | फ्रान्स कसरी बन्यो संसारको ‘फेसन राजधानी’ ?
फ्रान्स कसरी बन्यो संसारको ‘फेसन राजधानी’ ?
फ्रान्सको राजधानी पेरिसलाई फेसनको राजधानी भनिन्छ । यसको पछि केही कारणहरू छन् । १७ औं शताब्दीको मध्येदेखि नै अनेकथरी फेसनको विकास भएको पेरिस सहर १८ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पश्चिमा विश्वको फेसनमा प्रभाव पार्ने हैसियतसम्म पुगिसकेको थियो। अहिले पनि विश्वमा चर्चित हुनको लागि फेसन डिजाइनरको पहिलो रोजाइमा फ्रान्स र त्यसमा पनि पेरिस सहर नै पर्ने गर्छ ।
लामो समयदेखि राज्यले समेत फेसनको विकासका लागि महत्व दिँदै आएको फ्रान्सले अहिले पनि विश्वको फेसन डिजाइनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ । धेरै पहिलेदेखि नै फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा समेत यसले राम्रो हिस्सा ओगट्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय फ्रान्सले विभिन्न मुलुकका संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाएकोले पनि यसलाई फेसनको राजधानीको रूपमा चिनाउने गरिन्छ । तर कसरी विकास हुँदै आयो त फ्रान्सको फेसन ?
फ्रान्सेली डिजाइनरहरूले लामो समयदेखि विश्वमा सबैभन्दा प्रख्यात र मनपर्ने फेसन ब्रान्डहरू सिर्जना गर्ने गर्दै आएका छन् । शैलीगत रूपले नवीन र प्राविधिक एव‌ं फरकपनका कारण फ्रान्सेली कपडा उद्योगको उल्लेखनीय प्रतिष्ठा १७औं शताब्दीदेखि नै चर्चित र विस्तारित रहेको पाइन्छ ।
फ्रान्सेलीहरू आफ्नो सबैखाले मौलिक डिजाइन विकासको श्रेय १६४३ देखि शासनमा उदाएका राजा लुइस चौधौंलाई दिने गर्छन् । लुइस चौधौंको पालाका पहिरन एवं फेसनहरूको अवशेष भर्साइल दरबारका विभिन्न शैली एव‌ं भर्साइल दरबारबाट प्रभावित भएका विश्वका विभिन्न दरबारहरूमा समेत पाउन सकिन्छ । नेपालमा समेत बनेका कतिपय नवशास्त्रीय वास्तुकलामा बनेका भवनमा तत्‍कालीन समयको फेसनको प्रभाव पाउन सकिन्छ ।
बिहिबार १२, चैत २०७७ ०७:४४ मा प्रकाशित